UMcCarthy uvuma ulobi ngomsebenzi weBafana - Impempe
UMcCarthy uvuma ulobi ngomsebenzi weBafana
April 8, 2021 April 8, 2021 Impempe.com
UBenni McCarthy uthi engalingeka uma lingavela ithuba lokuthi ayoqeqesha eqenjini lesizwe iBafana Bafana ngoba kuyazwela kuye ukuyibona ibhacaza kangaka futhi seyize yaphenduka inhlekisa.
UMcCarthy ungumqeqeshi waMaZulu FC njengamanje kanti abaphathi bakhe kuleli qembu laseThekwini sebekusho kaningana ukuthi ngeke bavume ahambe noma ngabe iSafa iza kubo seyisonge isigqoko.
Nokho uMcCarthy yena uthi yinto angayicabangisisa leyo uma ingavela. Uthi ukunikwa Lo msebenzi kukhomba inhlonipho izwe lakho elinayo ngawe.
“Njengomunye owayedlala futhi manje isengumqeqeshi, ngiyafuna ukupheka amaqembu amakhulu ezweni,” usho kanje uMcCarthy ekhulu nabeBBC Sport kuleli viki.
“Uma lokho kusho ukuthi kumele uqeqeshe iqembu lesizwe lakini elingenzi kahle – leyo yinto engingeke ngenqabe ukuyenza.
“Yize nginithanda ukuxhumana nabadlali nsukuzonke, ngibacija, ngibalungiselela umdlalo olandelayo, iqembu lami lesizwe lidonsa kanzima ngakho uma kuvela ithuba lokuthi ngieize kulo ngicabanga ukuthi ngingakwenza lokho,” kugcizelela uMcCarthy owayengumgadli ongalibheki ipali ngesikhathi zakhe.
Uthi ukuqeqesha iqembu lesizwe langakini yinto enkulu kakhulu kunoma yimuphi umqeqeshi futhi akumele ithathwe kalula ngoba ifana nokusebenzela isizwe emkhakheni omqoka.
“Impela yinto engicabanga ukuthi ingifanele ngoba ayikho into engangenza ngiziqhenye ukwedlula ukuqeqesha izwe lami, ngilifake eNdebeni yoMhlaba.
“Lokho kungaba ngenye yezinto ezinkulu nezingahlala zikhumbuleka empilweni yami, yize singasekho isikhathi esanele (ngaphambi kokuqala kwemidlalo yokuhlungela iNdebe yoMhlaba), kodwa yinto engicabangayo ngayo futhi iyithuba engingalithatha uma livela,” kuchaza uMcCarthy.
IBafana isale ingenamqeqeshi ngemuva kokuxoshwa kukaMolefi Ntseki kulandela ukwehluleka kwakhe ukufaka leli qembu kwi-Africa Cup of Nations (Afcon) ezoba seCameroon ekuqaleni konyaka ozayo.
Previous Previous post: AmaProteas akhale ngaphansi kwiPakistan eCenturion
Next Next post: UBaccus uhlohla ozakwabo ngokuyimpintshela ekhoneni iHoroya